Talo soo jeedin: Garaad Jaamacoow Khaatumo laba maaha! | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Waxaan dhegeystay shalay 17/06/17 mudane Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka soo horjeestay heshiiskii Khaatumo iyo Somaliland. Garaadku inuu taageero iyo inuu ka soo horjeestaba way u furnayd wuxuuse doortay inuu kasoo horjeesto oo weliba canbaareeyo. Waan ku ixtiraamayaa go’aankiisaas.
Garaadku wuxuu gunaanadkii kusoo xidhay hadalkiisa in wax uu ugu yeedhay “goleyaasha Khaatumo” ay degdeg isugu yimaaddaan oo la xisaabtamaan madaxdii heshiiskaas gashay si wadajir ahna go’aankaas looga noqdaa. Wuxuu kaloo intaa raaciyey “haddii loo baahanyahayna waa in shirweyne khaatumo la qabtaa”.
Labadan su’aalood ayaa u baahan inaan is weydiinno si aan u fahhanno Khaatumada Garaad Jaamac dib ugu godlayo.
Waa maxay Khaatumo? Maxayse soo kordhisay?
1) Khaatumo waa calaamad kala qaybsanaan, waa calaamad khilaaf, waxay ku bilaabantay khilaaf waxyna ku hoyatay Hargeysa iyadoo khilaafkeedii xambaarsan. Ilaahay ha isu barakeeyo iyada iyo Hargeysa.
Garaad Jaamac Garaad Cali waxaan usoo jeedinayaa hadduu rabo in wax la saxo waa inuu talo ugu noqdaa Isimmadii kale ee reerka, waa inuu ka qaybqaataa shirkii wadatashiga ee loo ballansanaa in Buuhoodle lagu qabto sidaana kaga qayb galaa isagoo raaskiisa hoggaaminaya. Garaadka waxaan kaloo kula talinayaa inuu meel iska dhigo waxyaalihii khiyaaliga ahaa ee Khaatumo abuurtay ee aan waxba ka tarayn midnimada wadatashiga iyo wadajirka reerka Dhulbahante oo ay ka mid ahaayeen “Garaadka Guud”. Waxaasi waxba u kordhin maayaan isaga iyo kuwa ku hafraya toonna. Garaad Jaamac waa Garaad ka soo jeeda Garaadnimo fac dheer, wuxuuse Garaad u yahay qoyskii boqraday ee Bahararsame ee uu adeerkii iyo aabbihii ka dhaxlay intaasaa sharaf ugu filan.